ပွဲရံ — Steemit
naylinn (46)in #myanmar •3years ago (edited)
ွ ကျွန်တော်တို့Steemitမှမိတ်ဆွေအများစုလည်းမိမိတို့၏ပင်ရင်းအလုပ်အကိုင်ကိုလုပ်ကိုင်ပြီးပိုလျှံလာသောအချိန်များတွင်စာရေးနေကြသည်ဟုယူဆမိပါသည်။ှsteemitတွင်စာရေးခြင်းသည်ချက်ချင်းလက်ငင်းသူဌေးမဖြစ်သော်လည်းအနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေသည်ဟုသဘောထားရမည်ဖြစ်သည်။တစ်နေ့နာရီဝက်၊တစ်နာရီအချိန်ပိုလေးများကိုစုစည်းပြီးနည်းနည်းချင်းရေးသွားလျှင်ရသည်။ကျွန်တော်တို့ Myanmar Steemit Community တွင် promotion post များအတွက်ချမှတ်ထားသောအဓိကစည်းကမ်းမှာ copy မကူးရန်သာဖြစ်သည်။အဖွဲ့ဝင်အများစုကလည်းအခုမှစာစရေးသူများဖြစ်ကြသည့်အလျောက်(ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်ဖြစ်သည်)်သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များက copy မဖြစ်စေရန်သာအဓိကသတိပေးပြီး အရေးအသားဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသက်ညှာပေးပြီး promotion ပေးနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။စားရေးသူအဖွဲ့ဝင်များကလည်းလွယ်လွယ်ရသည်ဟုသဘောမထားပဲတစ်ပတ်ထက်တစ်ပတ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားပြီးရေးသားသင့်ပါသည်။ဆရာကြီးပီမိုးနှင်း၏စကားလေးတစ်ခွန်းနှင့်နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါသည်။ “အချိန်သည်သင့်အားပွဲရံကိုယူလာပြီးဆက်သ၏။လက်မခံလျှင်စကားမပြောဘဲဝမ်းနည်းစွာထွက်သွားရ၏။ဆုံးပါးသွားသောပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးရ၏။ဆုံးပါးသောအချိန်ကိုကားပြန်ပြီးမရချေ။”
Credit: all photo from google images
#valueoftime #writing #blog #esteem
3 years ago in #myanmar by naylinn (46)
theinzawlin (51)3years ago
အစ်ကိုပြောတဲ့အထဲမှာ အဲကွန်းပြင်တဲ့ အလုပ်ကို သဘောကျမိတယ်ဗျ အခုလိုမျိုး ထောက်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အချိန်ဆိုတာ တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဗျ အစကမလုပ်မိခဲ့လျှင် နောင်မတနေလို့လည်း သူကပြန်လည်ရောက်ရှိမလာတော့ပါ
naylinn (46)3years ago
hzerok (44)3years ago
အ​ရေးအသားလည်း​ကောင်းပီးဗဟုသုတလည်းရပါတယ်​။thank for post
ဟုတ်​ ​thank ပါ
တပတ်ထက်တပတ် အရေးသား ပိုကောင်းလာတယ် G3 တွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်😁😁
အတတ်​နိုင်​ဆုံး​တော့ ကြိုးစားပြီး​ရေးရတာပဲ မကြည်​​ရေ
thihakoko (57)3years ago
v100%$0.07 v n m
v100%$0.06 v n m
မှန်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ယခုတင်ပြသောပညာရပ်များကဘွဲ့ရတစ်ယောက်ထက်ပင်ပို၍၀င်ငွေရနိုင်တယ် တကယ့်အကြံကောင်းပါဘဲဗျာ
ဟုတ်​တယ်​ ဘရို တတ်​​ကျွမ်းထားဖို့ပဲလိုတာပါ
phyozawooburmes (53)3years ago
nannhtike (52)3years ago
yekungsatthone (48)3years ago
thetnaingmin (46)3years ago
ရေးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်နေရမှာ တော်လာဘီ စာဆိုတာက ဖတ်တဲ့သူအတွက်တစ်ခုခုကျန်ခဲ့ဖို့အဓိကဘဲလေ
naingwintun (47)3years ago
မှန်ပါတယ်။အသုံးချ ပညာရပ် တစ်ခုခုနဲ့ ဆိုရင် အလုပ်ပိုပေါပါတယ်။
နည်းပညာဆိုတာ လိုက်လိုကိုမမှိဘူး ကျေးဇူးပါသိခွင့်လေရလို
ရေကိုတပေါက်ခြင်းစုသလိုပေါ့လေ တနေ့တော့ အိုးအပြည့်ရမှာပဲ
This post has receiveda3.52% upvote from thanks to: @naylinn.
You gota4.00% upvote from @passive courtesy of @naylinn!
You gota6.55% upvote from @nado.bot courtesy of @naylinn!
You gota9.19% upvote from @luckyvotes courtesy of @naylinn!